DBM | YEC
DBM (Diploma in Business and Management)
Business ကို ဘယ်က စလေ့လာရမယ်လို့ မသိသူများ၊ MBA တက်လိုပြီး စီးပွားရေးပညာရပ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အခြေခံမရှိသူများအတွက် City Of Oxford College (UK) မှ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု Diploma
Q. စီးပွားရေးကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ အခြေခံမရှိပါ။ ဘယ်ကစတင်လေ့လာသင့်ပါသလဲ???
A. City of Oxford College (UK) မှ ချီးမြင့်မည့် Diploma in Business and Management Diploma ကို တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ သင်တန်းကာလမှာ ငါးလ ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဘာသာရပ်ခြောက်ဘာသာကို လေ့လာသင်ကြားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
***(PS : ထူးခြားချက်မှာ Business Subjects တွေကိုတပြိုင်တည်းသင်ယူနိုင်မည့် အခွင့်အရေး)***
2. Fundamental of Economics
5. Introduction to HR Management
6. Principles of Accounting တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
☑စာမေးပွဲစနစ်မဟုတ်ဘဲ Assignment-based system ဖြစ်ပါသည်။
ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းစီ သင်ကြားပြီးသည်နှင့် တစ်လ တစ်ခါ စစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ QCF Level3နဲ့ ညီမျှသော Diploma မှာ ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းကြေးမှာ ၅ လ လုံးအတွက် 420,000 ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။
☑City of Oxford ကို Registration Fee: $230 (Fourth Batch) သွင်းရပါမည်။ (Diploma မယူဘဲ Knowledge အတွက်တက်ရောက်ပါက City of Oxford College ကို သွင်းရန်မလိုပါ။) City of Oxford College တွင် Register လုပ်မည်ဆိုပါက သင်တန်းစသည့်ရက်မှ ၈ ပတ်အတွင်း စာရင်းပေးသွင်းရပါမည်။
✅Saya U Kyaw Htin Win
✅Teacher Myint Maw Pyone
– Organization Behavior
– Introduction to Human Resource Management
✅ Dr. Phyo Paing
M.B.,B.S, Graduate Diploma in Business Management, ABE (UK), MBA
1. Business Management ကို စတင်လေ့လာမည့်သူများ
2. MNCs များတွင် လုုပ်ကိုင်လိုသူများ
4. ဘွဲ့ရပြီး UK မှ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု Diploma ရယူလိုုသူများ
5. တက္ကသိုလ်တစ်ခုခု တက်ရောက်နေပြီး စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှု diploma ကို weekends တွင် တက်ရောက်လိုသူများ
6. MBA မတက်ရောက်မီ စီးပွားရေးစီမံခန်.ခွဲမှု နှင့် ပတ်သက်သည့် အခြေခံရထားလိုသူများ
✅Starting Date- Feb 15
✅Wed, Thurs, Friday – 6:30 PM to 8:00 PM
✅ကျောင်းသားဦးရေ 35 ယောက် အထိသာ ကန့်သတ်ထားပါသည်။
✅သင်တန်းကြေး – 420,000 ကျပ်
✅Registration Fee: $230
(မှတ်ချက် City of Oxford Enrollment လုပ်သူများ သင်တန်းကြေးကို အရစ်ခွဲသွင်းနိုင်ပါသည်။ သင်တန်းအပ်အပ်ချင်း 120,000 နှင့် တစ်လကို တစ်သိန်းနှင့် သုံးလ ပေးသွင်းသွားနိုင်ပါသည်။)
City of Oxford Student Enrollment အတွက် ငါးပတ်အတွင်း ပေးသွင်းသွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
39 လမ်း (ဗန်းမော်တိုက်လမ်း)၊ 71 လမ်းနှင့် 72 လမ်းကြား၊
@Yar Zar Business Center, မန္တလေး။
Contact number: 09794461888